Isivumelwano Somsebenzisi (i-EULA)
I-copyright nezimpawu zokuhweba
Kwa-Plum Amazing, LLC., ilungelo lakho lobumfihlo liyinkinga enkulu. Senza konke esingakwenza ukuze sivikele ubumfihlo babasebenzisi bethu. Amarekhodi ethu amakhasimende awadayisi noma awahwebi, futhi ngeke sidalule idatha yekhasimende lethu kunoma yimuphi umuntu wesithathu ngaphandle kwalapho kungase kudingwe ngokomthetho. Ibhizinisi lethu lizuza imali ngokuthengisa isofthiwe, futhi hhayi ngokwenza imali ngedatha yakho yangasese. Inqubomgomo yethu yobumfihlo ingafinyezwa kalula emugqeni owodwa:
Izinhlelo Zethu Ezisezitolo Zokusebenza
Ukuthengiswa kwezinhlelo zethu zokusebenza ku-Apple noma ku-Google kubuswa izitatimende zabo zobumfihlo. Asitholi noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu kusukela ezinombolweni zokuthengisa nje.
Asiqoqi noma iyiphi idatha yomsebenzisi ezinhlelweni zokusebenza zesitolo sezinhlelo zokusebenza
Ukubuyekezwa kohlelo lokusebenza
Yonke inguqulo entsha yohlelo lokusebenza ibuyekezwa i-Apple ne-Google. Zonke izinhlelo zethu zokusebenza kulezo zitolo zibuyekezwe izikhathi eziningi eminyakeni eminingi.
Asiqoqi Ulwazi Lomuntu Siqu Sisebenzisa Izinhlelo Zokusebenza Zethu
Asiqoqi, asisebenzisi, asilondolozi, noma asikwazi ukufinyelela noma iyiphi idatha yomuntu siqu kunoma yiziphi izinhlelo zokusebenza zesitolo sethu sohlelo lokusebenza.
• Izimvume zivumela izinhlelo zokusebenza ukuthi zikufinyelele ulwazi lwakho. •
• Asikwazi ukufinyelela kuyo. •
Izilungiselelo ezingazodwana eziphathelene nezinhlelo zokusebenza akuzona ezomuntu siqu futhi zigcinwa kuphela kudivayisi yakho. Ungaphinda ucelwe ukuthi unikeze ukufinyelela kulabhulali yakho yezithombe, kodwa lokhu kuphela ukuze uvule izithombe zakho ezinhlelweni zethu zokusebenza zezithombe, njenge-iWatermark, futhi uzigcine uzibuyisele kulabhulali yakho. Asilucubunguli nhlobo lolo lwazi futhi asinakho ukufinyelela kulo.
I-iWatermark uhlelo lokusebenza lwezithombe ze-batch watermarking. Ukwenza lokho kudinga imvume yokufinyelela zonke izithombe esikhundleni sakho. Asikwazi ukufinyelela kunoma yiziphi izithombe noma idatha. Asikho isiteshi sokuthumela ulwazi.
Ngaphezu kwalokho, uma uthatha isithombe usebenzisa izinhlelo zethu zokusebenza zokuthatha izithombe, idatha yendawo ingalondolozwa noma isuswe esithombeni, kodwa asinakho ukufinyelela kuleyo datha futhi ayabelwa muntu ngaphandle kokuthi wena ngokwakho ukhethe ukwabelana ngesithombe.
Izinhlelo zokusebenza ezithengiswa kuPlum Amazing
Esitolo se-plum emangalisayo kuwebhusayithi yama-oda yudala i-akhawunti ukuze ugcine ukuthenga kwakho kwedijithali. We gcina igama lakho ne-imeyili kuphela. Lokhu kugcinwa ukuze kuhlinzekwe ilayisense ngemva kokuthenga nangesikhathi esizayo kubasebenzisi abangase balahlekelwe (iningi labo) lolo lwazi. Futhi uma ulahlekelwa amarisidi akho, ukuthuthukiswa noma okhiye belayisense bezinhlelo zokusebenza.Ulwazi luyagcinwa ukuze abasebenzisi bakwazi ukungena noma nini ukuze balithole futhi.
Asilokothi sibe nedatha yekhadi lakho lesikweletu ngoba sisebenzisa i-Stripe ne-PayPal (banezinqubomgomo zabo zobumfihlo). Imisebenzi yakho ibethelwe esipheqululini sakho futhi ithunyelwe ibethelwe eziphakelini zabo ukuze singalokothi sibone ulwazi lwekhadi lesikweletu.
Uma ukugunyazile sihlala sithumela izincwadi zezindaba. Kusisiza ukuthi sihlale unolwazi ngezethulo zakamuva zemikhiqizo, izibuyekezo zesofthiwe, izipesheli, nemicimbi ongase uthande ukuzwa ngayo.
Uma ungafuni sikugcine unolwazi ngezindaba zePlum Amazing, izibuyekezo zesoftware kanye nemininingwane yakamuva ngemikhiqizo nezinsizakalo chofoza imininingwane ye-akhawunti bese usetha okuncamelayo ukuze ungalutholi ulwazi. Futhi ungazikhipha ohlwini kalula kunoma iyiphi i-imeyili esiyithumelayo.
Izinhlelo Zethu Zithobelana Nomthetho Wokuvikela Ubumfihlo Bezingane Ku-inthanethi
Izicelo zethu aziqoqi ulwazi lomuntu siqu kunoma ubani, okuhlanganisa nezingane ezingaphansi kweminyaka engu-13.
Uma unemibuzo mayelana nale Nqubomgomo Yobumfihlo, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ku-info@plumamazing.com
Le EULA yisivumelwano sonke phakathi kwethu futhi ithatha indawo yemigomo yanoma yimaphi ama-oda wokuthenga nanoma yikuphi ukuxhumana noma ukukhangisa maqondana neSoftware. Uma noma yikuphi ukuhlinzekwa kwale EULA kugcinwa kungasebenzi, okusele kwale EULA kuzoqhubeka nokusebenza ngokugcwele.
Lesi Sivumelwano sizonqanyulwa ngokuzenzakalela uma wehluleka ukuthobela noma iliphi igama. Asikho isaziso esizodingeka kwaPlum Amazing ukwenza lokho kunqanyulwa. Kunoma ikuphi ukunqanyulwa kwalesi Sivumelwano (kungaba nguwe noma ngePlum Amazing), uzokuyeka ngokushesha ukusetshenziswa kwesoftware kanye nanoma yiziphi izinsizakalo ezihambisanayo.
Isoftware ayikwazi ukubekezelela amaphutha futhi ayiklanyelwe, ayenziwa noma yenzelwe ukusetshenziswa noma ukuthengiswa kabusha njengemishini yokulawula on-line ezindaweni ezinobungozi ezidinga ukusebenza okungaphumeleli, njengokusebenza kwezikhungo zenuzi, ukuhamba kwezindiza noma amasistimu wokuxhumana, umoya ukulawulwa kwethrafikhi, imishini yokuxhasa impilo ngqo, noma izinhlelo zezikhali, lapho ukwehluleka kweSoftware kungaholela ekufeni, ekulimaleni komuntu, noma ekulimaleni okukhulu ngokomzimba noma kwemvelo (“High Risk Activities”). Ngokunjalo, iPlum Amazing NABAPHAKELI BAYO BAKHULULEKILE NGOKUKHULULEKILE NOMA YILUPHI UKUVELA OKANYE OKUFANELE KWENZIWE ISIQINISEKISO SOKULUNGELA IMISEBENZI YOBUNGOZI OBUPHAKEME. Uyavuma ukuthi iPlum Amazing NABAPHAKELI BAYO NGEKE BABE NESIBOPHO SOKWENZA IZIMANGALO NOMA UKULIMALA OKUQhamuka EKUSETSHENZISWENI KWE-SOFTWARE KULEZI ZICELO. Isoftware "iyinto ethengiswayo," njengoba lelo gama lichazwa ku-48 CFR 2.101 (Oct. 1995), eliqukethe "isoftware yamakhompiyutha ezentengiso" kanye "nemibhalo yesoftware yamakhompiyutha ezentengiselwano," njengoba lawo magama esetshenziswa ku-48 CFR 12.212 (Sep. . 1995). Ngokuhambisana ne-48 CFR 12.212 kanye ne-48 CFR 227.7202-1 kuya ku-227.7202-4 (Juni 1995), bonke Abasebenzisi Bokuphela Kohulumeni base-US bathola iSoftware ngalawo malungelo abekwe lapha kuphela.
Awungeke unikeze noma uhambise lesi Sivumelwano noma amanye amalungelo noma izibopho lapha, ngokusebenza komthetho noma ngenye indlela. I-Plum Amazing ingabela lesi Sivumelwano noma kunini lapho kubhalwe wena isaziso. Lesi Sivumelwano sizobophezeleka futhi sizozuzisa amaqembu, abalandela emva kwabo kanye nokwabiwa okuvunyelwe. Alikho iqembu elizohluleka noma libe nesibopho nganoma yikuphi ukubambezeleka, ukwehluleka ukusebenza (ngaphandle kwesibopho sokukhokha) noma ukuphazanyiswa kwensizakalo okuholele ngqo noma ngokungaqondile kunoma iyiphi imbangela engaphezu kwamandla ayo. Ubudlelwano obuphakathi kukaPlum Amazing bobo bosonkontileka abazimele futhi awunakuba negunya lokubopha iPlum Amazing nganoma iyiphi indlela.
Lesi Sivumelwano sakha isivumelwano esiphelele futhi esikhethekile phakathi kwethu, ngaphandle kwanoma yimiphi eminye imibhalo noma okokusebenza okunikeze wena. Imigomo nemibandela equkethwe kulesi Sivumelwano kungenzeka ingashintshwa nguwe ngaphandle kokubhala okusayinwe nguwe kanye nommeleli ogunyaziwe wePlum Amazing. Uma noma yikuphi ukuhlinzekwa kwalesi Sivumelwano kugcinwa njengokungenakuphoqeleka nganoma yisiphi isizathu, lokho kuhlinzekwa kuzolungiswa kuphela ngezinga elidingekayo ukuze kwenziwe kuphoqeleke, futhi leso sinqumo ngeke sithinte ukuphoqeleka kwaleyo nhlinzeko ngaphansi kwezinye izimo, noma kokunye okusele kwalokhu ngaphansi kwazo zonke izimo.
Imithetho yase-United States of America kanye ne-State of Hawaii ziyasivikela futhi zisilawule lesi sivumelwano. Isoftware nawo wonke amalungelo, isihloko kanye nempahla yokusungula kuhlala nePlum Amazing. IPlum Amazing iwagcina wonke amalungelo anganikezwanga ngokucacile kulesi sivumelwano.
Uma unemibuzo maqondana nale EULA noma ufisa ukuxhumana noPlum Amazing. nganoma yisiphi isizathu, sicela uthumele i-imeyili:
Isivumelwano Selayisense Lomsebenzisi Wokugcina (“EULA”)
Le EULA iyisivumelwano esisemthethweni phakathi kwakho (kungaba umuntu oyedwa noma ibhizinisi elilodwa) ne-Plum Amazing (“iNkampani”) yalo mkhiqizo wesoftware futhi ingafaka phakathi imidiya ehambisanayo, idatha kanye nezinsizakalo, izinto eziphrintiwe, izibuyekezo kanye ne-inthanethi noma imibhalo ye-elekthronikhi (ngokuhlanganyela i- “Software”).
Ngokufaka, ukukopisha noma ukusebenzisa iSoftware uyavuma ukuboshwa yile EULA. Uma ungavumelani nemigomo yale EULA, ungafaki, wenze kusebenze, noma usebenzise le Software.
Isoftware ivikelwe yilungelo lobunikazi kanye neminye imithetho yezimpahla ezisetshenziswayo.
Inkampani kanye / noma abahlinzeki bayo bangabanikazi besihloko, ilungelo lobunikazi namanye amalungelo empahla yengqondo kuSoftware. Isoftware inikwe ilayisense kuwe (umuntu noma inhlangano) oyisebenzisayo ngokuya ngemigomo nemibandela ekule EULA.
Isoftware ivikelwe yimithetho ye-copyright yase-United States nakwamanye amazwe, nangezivumelwano zamalungelo obunikazi zomhlaba wonke.
Isoftware inikwe ilayisense kuwe (umuntu noma inhlangano) oyisebenzisayo ngokuya ngemigomo nemibandela ekule EULA. Amalungelo onikezwe wona ngaphansi kwale layisense awakhethi kuphela futhi awadluliseki. Isoftware Elayisensiwe inelayisense ayithengiswa.
(a) Isoftware Yokuhlola - Ngokuya ngemigomo yale EULA, ungasebenzisa iSoftware ngezinjongo ezizimele nezingezona ezentengiso ngaphandle kwenkokhiso ngokuhlola. Ngemuva kokuhlola isoftware umsebenzisi angakhokha imali ye-shareware software ukuthola ilayisense yokuvula ngokugcwele isoftware. Ngeminye imininingwane ngamanani nezindlela zokuthenga, sicela uvakashele iwebhusayithi yePlum Amazing, www.plumamazing.com.
(b) Ukwabiwa Kabusha Kwesoftware Yokuhlola. Uma usebenzisa iSoftware ngokuhlola ungenza amakhophi we-Evaluation Software ngendlela othanda ngayo; unikeze noma ngubani amakhophi ngqo weSoftware Evaluation Software; bese usabalalisa i-Evaluation Software ngendlela yayo engashintshiwe ngezindlela ze-elekthronikhi (i-Inthanethi, iSocial Media (njenge-Facebook noma i-Twitter), ama-BBS, imitapo yolwazi yokusabalalisa i-Shareware, njll.). Awukwazi ukukhokhisa noma iyiphi imali ngekhophi noma ngokusebenzisa i-Evaluation Software uqobo, kepha ungakhokhisa imali yokusabalalisa ehlobene ngokufanelekile nanoma yiziphi izindleko ohlangabezana nazo ekusabalaliseni i-Evaluation Software (isb. Ukupakisha). Akumele umele nganoma iyiphi indlela ukuthi uthengisa iSoftware uqobo. Ukusatshalaliswa kwakho kwe-Evaluation Software ngeke kukuvumele kunoma yisiphi isinxephezelo esivela kwaPlum Amazing. Noma ngubani owabela kuye iSoftware ukhonjelwe kule EULA.
2. Ilayisense Yomsebenzisi Owodwa - Ilayisense Yomsebenzisi Olinganayo inika umsebenzisi oyedwa ilungelo lokufaka nokusebenzisa kukhompyutha eyodwa noma eningi esetshenziswa ngumuntu oyedwa ngasikhathi. Isoftware inikezwa ukuthi isetshenziselwe isikhathi esingenamkhawulo. Isoftware ingasetshenziswa kuphela ngokuya ngokusetshenziswa okuhlosiwe.
3. Ilayisense Yomsebenzisi Omningi - Ilayisensi Yomsebenzisi Eningi isiza inhlangano ukwenza iSoftware itholakale enanini labasebenzisi elishiwo Esivumelwaneni. Umnikazi welayisense angasebenzisa iSoftware kuze kufike kumkhawulo weLayisense Yomsebenzisi Eliningi. Inani labasebenzisi akumele leqe umkhawulo weLayisensi Yomsebenzisi Eliningi. Izaphulelo zentengo zevolumu Isoftware inikezwa ukuthi isetshenziselwe isikhathi esingenamkhawulo. Isoftware ingasetshenziswa kuphela ngokuya ngendlela okuhloswe ngayo. Le layisense ayihlanganisi noma yimaphi amalungelo okubhalwa kwamakhophi aqinile, ukwesekwa kwezobuchwepheshe, usizo ngocingo, isevisi, noma yiziphi izithuthukisi noma izibuyekezo zeSoftware ngaphandle kwaleyo iNkampani noma abalingani bayo abanganquma ukuyinikeza ngokubona kwabo okuphelele. Ngaphandle kwelayisense ebekiwe ebekiwe ngenhla, iNkampani noma abalingani bayo abanikeli amanye amalungelo anoma yiluphi uhlobo, kungaba ngesimiso, ngomqondo noma ngenye indlela.
Awungeke ubuyisele emuva unjiniyela, uqoqe, noma uqaqe iSoftware, ngaphandle kwalapho kuphela lokho kuvunyelwa ngokusobala ngumthetho osebenzayo ngaphandle kwalomkhawulo. Awukwazi ukuqasha, ukuqashisa, noma ukubolekisa iSoftware. Awungeke ushicilele noma usabalalise esidlangalaleni noma yiziphi izinombolo ze-serial, amakhodi wokufinyelela, amakhodi wokuvula, amaphasiwedi, noma eminye imininingwane yokubhalisa eqondene nomsebenzisi ozovumela umuntu wesithathu ukuthi enze kusebenze iSoftware ngaphandle kwelayisense evumelekile.
IPlum Amazing ingaguqula imigomo yalesi Sivumelwano nganoma yisiphi isikhathi, kufaka phakathi kepha kungakhawulelwe kunani, okuqukethwe noma ubunjalo banoma iyiphi idatha noma insizakalo ehlotshaniswa neSoftware. Uma kwenzeka iPlum Amazing iguqula isivumelwano, ungasinqamula isivumelwano. I-Plum Amazing ingasinqamula lesi Sivumelwano noma kunini lapho sikwazisa, inqobo nje uma uzoba nelungelo lokuthola noma yiziphi izinsizakalo osuvele uzikhokhele, noma ukubuyiselwa imali ngokubona kukaPlum Amazing. IPlum Amazing ingahlinzeka ngesaziso nge-imeyili noma ngokushicilela izinguquko kuwebhusayithi yayo. Isibopho sakho sokukhokha imali enqwabelene nezimali zizosinda ekunqanyulweni kwalesi Sivumelwano. Uyaqonda futhi uyavuma ukuthi ukwesulwa kokubhalisile kungukuphela kwelungelo lakho nekhambi maqondana nanoma iyiphi impikiswano nePlum Amazing. Lokhu kufaka, kepha akukhawulelwe, kunoma iyiphi impikiswano ehlobene, noma evela: (1) noma yiliphi igama lalesi Sivumelwano noma ukuphoqelelwa kukaPlum Amazing noma ukusetshenziswa kwalesi Sivumelwano; (2) noma iyiphi inqubomgomo noma umkhuba wePlum Amazing, kufaka phakathi noma iyiphi Inqubomgomo Yobumfihlo yePlum Amazing, noma ukuphoqelelwa noma ukusetshenziswa kwalezi zinqubomgomo zikaPlum Amazing; (3) Okuqukethwe okutholakala ngePlum Amazing noma nge-Intanethi noma yiluphi ushintsho kokuqukethwe olunikezwe ngePlum Amazing; (4) ukukwazi kwakho ukufinyelela kanye / noma ukusebenzisa okuqukethwe; noma (5) inani noma uhlobo lwemali ekhokhwayo, izintela ezisebenzayo, izindlela zokukhokha, noma olunye ushintsho kuzimali, izintela ezisebenzayo, noma izindlela zokukhokha.
Ungenza amakhophi wesipele nokugcina umlando weSoftware, inqobo nje uma amakhophi wakho wesipele nowokugcina umlando engafakwanga noma angasetshenziswa ngabasebenzisi abangenalo ilayisense lokusebenzisa iSoftware. Kuyabuye kuhlinzekwe ukuthi wonke lawo makhophi aphethe ilungelo lobunikazi, ilungelo lobunikazi nokunye ukumakwa kwempahla ebhaliwe okuvelayo noma okukuSoftware. Awungeke udlulisele amalungelo kwikhophi eyisipele noma yokugcina umlando.
1. Akufanele usabalalise noma iyiphi i-software oyithuthukisayo efaka iSoftware. 2. Ngaphandle kwamakhophi we-Evaluation Software angahunyushiwe angahle asatshalaliswe ngokuphelele, akumele usabalalise noma yimaphi amafayela atholakala kule software. 3. Akufanele uqashe noma uqashise iSoftware.
Ukusekelwa kuyatholakala ngewebhusayithi yethu nange-imeyili kubasebenzisi ababhalisiwe.
IPlum Amazing, Inc. ngezikhathi ezithile, ingahle ibuyekeze noma ivuselele umkhiqizo weSoftware. Abasebenzisi abanelayisensi yomsebenzisi oyedwa nabasebenzisi abaningi banelungelo lokukhulula ukuthuthukiswa okuncane kuze kube ukukhishwa okukhulu okulandelayo. IPlum Amazing, Inc. ayinaso isibopho sokunikeza lezo zibuyekezo noma izibuyekezo.
Ukuziphendulela Kwamawaranti IZINSIZO NOKUQUKETHWE KUNIKEZELWA “NJENGOBA KUNJALO” NGAPHANDLE KWESINYE ISIQINISEKISO SANOMA YILUPHI UHLOBO, KANYE NAKWISIKHATHI SOKUPHAKATHI ESIVUMELEKILE NGOMTHETHO OSEBENZEKAYO, IPlum Amazing IZIMANGALO NANOMA YINI NAZO ZONKE IZIMPAWU ZESOFOFAWU, PHAWULA UKUPHENDULA, UKUPHENDULA, UKUPHENDULA, OKUNYE UKUNIKEZELWA KWALE EULA NOMA UKUXHUMANA NAWE, NGENHLONIPHO ITHERETO, KUFAKA NGAPHANDLE KWOMKHAWULO YILUPHI IZIMPAWU EZIBEKIWE ZOKUTHENGISA, UKULUNGELA INHLOSO ETHILE, KANYE NOKUNGABONI. UBUNGOZI BONKE OBUPHELA EKUSETSHENZISWENI NOMA EKUSETSHENZISWENI KWEMISEBENZI NOKUQUKETHWE KUSELE KUWE.
UKUKHALELWA KWESIBOPHELELO NGEKE KWENZEKE INKAMPANI IBE NESIBOPHO SOKUTHOLA IZINZUZO EZILAHLEKILE NOMA AMATHUBA EBHIZINISI, UKULAHLEKA KOKUSETSHENZISWA, UKUTHUTHUKISWA KWEBHIZINISI, UKULAHLEKELWA KWEDATHA, NOMA YILUPHI OLUNYE UTHI LOKUQHUBEKA KWEZIMALI NGESIVUMELWANO, ISIKHATHI, UKUNGALUNGEZI, ISIBOPHO SOMKHIQIZO, NOMA NGOKUNJALO. LOMKHAWULO UZOKUSEBENZISA NAKUBA KUNGENZEKA UKUTHI INKAMPANI ISELULEKISIWE NGOKWENZEKA KOKWENZEKA KOMONAKALO ONJALO. ISIBOPHO SENKAMPANI NGAPHANSI KWALE EULA NGEKE, NGAKHO KWENZEKE, NGAPHANDLE KWEZIMALI ZELAYISENSI, UMA KUKHONA, OKHOKHELWE NGUWE KUNKAMPANI YENKULUMO YELAYISENSI ELAWULISWE NGUWE NGALESI EULA.
Lesi sivumelwano sisebenza size sinqanyulwe. Lesi sivumelwano singanqanyulwa ngaphandle kwesaziso esivela kwa-Plum Amazing, Inc. uma wehluleka ukuhambisana nanoma iyiphi ingxenye yalesi sivumelwano. Lapho unqanyulwa uzosusa noma yimuphi ukhiye, ukhiphe isoftware bese uqeda noma yiziphi izinto ezibhaliwe nanoma yimaphi amakhophi wesoftware, ngaphandle kokulungiswa okwenziwe ezintweni ezibhaliwe noma kwisoftware.
Abasebenzisi bayacelwa ukuthi bagcine imali yokhiye wokubhalisa. Imininingwane yokubhalisa iyimfihlo futhi ukuze uyisebenzise akufanele idalulwe komunye umuntu.
Uyavuma ukuthi noma yimaphi amalungelo obunikazi bokusungula futhi ahlala eyimpahla yeNkampani. Akukho lutho kulesi Sivumelwano elizosebenza njengokwabelwa kwanoma yiliphi ilungelo le-Intellectual Property.
Imininingwane nolwazi olunikezwe yiSoftware yenzelwe ukusetshenziswa kuphela ngemidiya elayisensiwe kahle, okuqukethwe namathuluzi wokudala okuqukethwe. Kungumsebenzi wakho ukuthola ukuthi ngabe kukhona yini ilungelo lobunikazi, ilungelo lobunikazi noma amanye amalayisense adingekayo nokuthola noma yimaphi amalayisense anjalo okusiza kanye / noma ukudala, ukucindezela noma ukulanda leyo midiya nokuqukethwe. Uyavuma ukurekhoda, ukudlala futhi ulande kuphela lezo zinto onelungelo lobunikazi obufanele, ilungelo lobunikazi nezinye izimvume, amalayisense, kanye / noma imvume. Uyavuma ukubamba iPlum Amazing engenabungozi, uvikele futhi uvikele iPlum Amazing, izikhulu zayo, abaqondisi kanye nabasebenzi, ekulahlekelweni, ekulimaleni, ekuhlawulisweni nasezindlekweni (kufaka phakathi imali yabameli nezindleko) okuvela noma okuphathelene nanoma yiziphi izimangalo onazo ( i) ubuke, walanda, wafaka, wafaka, wakopisha noma wadlulisa noma yiziphi izinto (ngaphandle kwezinto ezinikezwe yiPlum Amazing) mayelana neSoftware ephula amalungelo elinye iqembu noma okwephula noma yimuphi umthetho, noma (ii) ephule noma yimiphi imigomo lesi Sivumelwano. Uma ungenisa iSoftware isuka e-United States, uzoboleka futhi ubambe iPlum Amazing engenabungozi kunoma iyiphi imisebenzi yokungenisa nokuthekelisa noma ezinye izimangalo ezivela kulokho kungeniswa.
Wena noPlum Amazing niyavuma ukuthi ikhambi elikhethekile lazo zonke izingxabano nezimangalo eziphathelene nganoma iyiphi indlela, noma ezivela ngenxa yalesi Sivumelwano, noma ukusebenzisa kwakho noma yikuphi okuqukethwe noma amasevisi ahlobene neSoftware, lizoba yisinqumo sokugcina futhi esibophayo. Ukulamula kuzokwenziwa ngaphansi kweMithetho Yokuxazulula Ezentengiselwano ye-American Arbitration Association (“AAA”) kanye Nezinqubo Zokungezelela ze-AAA zezingxabano ezihlobene nabathengi (“Imithetho Yabathengi ye-AAA”). Ukulamula kuzokwenzeka eLihue, eKauai. Kuwo wonke amandla avunyelwe umthetho: akukho ukulamula ngaphansi kwalesi Sivumelwano okuzohlanganiswa kunoma yikuphi okunye ukulamula, kufaka phakathi noma yikuphi ukulamula okubandakanya noma yimuphi omunye umnikazi welayisensi wePlum Amazing; akukho zinqubo zokulamula ngokwezigaba ezizovunyelwa; akukho ukutholwa noma ukubekwa kweqiniso kunoma ikuphi okunye ukulamula, ukwahlulela noma ukuqhutshwa okufanayo kunganikezwa umphumela ocacile noma wesibambiso estoppel kunoma yikuphi ukulamula lapha (ngaphandle kokuthi kunqunywe kokunye ukuqhubeka phakathi kwakho noPlum Amazing); futhi asikho isiphetho somthetho kunoma yikuphi okunye ukulamula okunganikezwa noma yisiphi isisindo kunoma yikuphi ukulamula lapha (ngaphandle kokuthi kunqunywe kokunye ukuqhubeka phakathi kwakho noPlum Amazing). Imali yakho yokulamula kanye nesabelo sakho sesinxephezelo somlamuli kuzokhawulelwa kulabo ababekwe Kumithetho Yomthengi ye-AAA ngensalela ekhokhwe yiPlum Amazing. Uma izindleko ezinjalo zizimisele ukweqisa, iPlum Amazing izokhokha yonke imali yokulamula kanye nesinxephezelo somlamuli. Wena noPlum Amazing ningamangalela enkantolo kuphela ukuphoqa ukulamula ngaphansi kwalesi Sivumelwano, ukuhlala kwamacala kusalindwe ukuxazululwa, noma ukuqinisekisa, ukuguqula, ukuphuma noma ukungena esahlulelweni ngomklomelo owenziwe ngumlamuli. Wena noPlum Amazing ngalokhu sivuma igunya eliphelele lezinkantolo zombuso nezikahulumeni eziseLihue, eKauai ukuphoqelela ukuhlinzekwa kwalesi Sigaba 11 nokuxazulula noma yiziphi izingxabano nezimangalo ezaziwayo enkantolo eziphathelene nganoma iyiphi indlela, noma ezivele kulokhu Isivumelwano. Inkantolo, hhayi umlamuli, yiyona ezonquma ukulamula futhi iphoqelele izivumelwano zokulamula eziqukethwe lapha, kufaka phakathi ukwenqatshelwa kokulamula okuhlanganisiwe nokulamula ngokwezigaba. Lesi Sivumelwano nazo zonke izingxabano nezimangalo ezihlobene nganoma iyiphi indlela, noma ezivela ngenxa yalesi Sivumelwano, zizolawulwa yimithetho Yezwe LaseHawaii, ngaphandle kokubhekiswa kokushayisana kwemigomo yezomthetho, kanye ne-Federal Arbitration Act.
Imininingwane © 2018 Plum Amazing, LLC. Wonke Amalungelo Agodliwe.
I-copyright kuyo yonke into enikezwe kule sayithi ("Isayithi") iphethwe yiPlum Amazing, LLC. noma ngomdali wokuqala walokho okubalulekile. Ngaphandle kokuthi kushiwo lapha, akukho okubhaliwe okungakopishwa, kukhiqizwe kabusha, kusatshalaliswe, kushicilelwe kabusha, kuhunyushwe, kulayishwe, kukhonjiswe, kuthunyelwe, kuthunyelwe emphakathini ngocingo noma kudluliswe nganoma iyiphi indlela noma nganoma iyiphi indlela, kufaka phakathi, kepha kungagcini lapho, i-elekthronikhi, imishini, ukukopisha, ukurekhoda, noma ngenye indlela, ngaphandle kwemvume ebhalwe phansi yePlum Amazing, LLC. noma umnikazi we-copyright.
Sicela ubhale uma unombuzo. Kunikezwa imvume yokubonisa, ukukopisha, ukusabalalisa kanye nokulanda izinto ezikulesi sayithi ukuze uzisebenzisele wena siqu, okungezona ezentengiselwano kuphela uma ungaziguquli izinto nokuthi ugcina wonke amalungelo obunikazi nezinye izaziso zobunikazi eziqukethwe yilokho okusetshenziswayo.
Ngeke futhi, ngaphandle kwemvume kaPlum Amazing, LLC., "isibuko" noma yikuphi okuqukethwe okukulesi Sayithi kunoma iyiphi enye iseva. Le mvume inqamula ngokuzenzakalela uma wephula noma iyiphi yale migomo noma imibandela. Lapho unqanyulwa, uzobhubhisa ngokushesha noma yiziphi izinto ezilandiwe neziphrintiwe. Noma ikuphi ukusetshenziswa okungagunyaziwe kwanoma iyiphi into equkethwe kuleli Sayithi kungahle kwephule imithetho ye-copyright, imithetho yophawu lokuhweba, imithetho yobumfihlo neyokukhangisa, kanye nemithethonqubo yokuxhumana nezimiso. Wonke amalungelo, isihloko kanye nenzalo enganikwanga ngokucacile kugodliwe.
Izimpawu zokuhweba, izimpawu zensizakalo, namalogo (“Izimpawu zokuhweba”) ezisetshenzisiwe neziboniswa kuleli Siza kubhalisiwe futhi kungabhalisiwe Izimpawu Zokuhweba zePlum Amazing, LLC. nabanye. Akukho lutho kuleli Siza okufanele kuthathwe njengokunikeza, ngokufaka, estoppel, noma ngenye indlela, noma iyiphi ilayisense noma ilungelo lokusebenzisa noma yiluphi uphawu lwentengiso olukhonjiswe eSizeni, ngaphandle kwemvume ebhaliwe yomnikazi wophawu lwentengiso. IPlum Amazing, LLC. iphoqelela ngamandla amalungelo ayo empahla enomqondo kuze kube sezingeni eligcwele lomthetho. Igama lePlum Amazing, LLC. noma uphawu lwePlum Amazing alunakusetshenziswa nganoma iyiphi indlela, kufaka phakathi ukukhangisa noma ukukhangisa okuphathelene nokusatshalaliswa kwezinto kulelisayithi, ngaphandle kwemvume ebhaliwe.
I-Plum Amazing, LLC. ilogo, i-iClock, i-CopyPaste kanye ne-iWatermark yizimpawu zokuthengisa ze-Plum Amazing, LLC. Zonke ezinye izimpawu zokuthengisa namagama okuhweba kuyimpahla yabanikazi bazo futhi asetshenziswa lapha ngezinjongo zokuzihlonza kuphela.
Ukwamukelwa Kwemigomo Yokusetshenziswa
Ukusetshenziswa kwaleli Sayithi kuncike kwimigomo ethile yokusebenzisa okuyisivumelwano esisemthethweni phakathi kwakho nePlum Amazing, LLC .. Ngokusebenzisa leSayithi, uyavuma ukuthi ufunde, waqonda, futhi wavuma ukuboshwa yiMigomo Yokusebenzisa. Sicela ubuyekeze Imigomo Yokusebenzisa; futhi uma ungavumelani nemigomo, ungasebenzisi leli Sayithi.
Izinto ezikulesi sayithi zihlinzekwa “njengoba kunjalo” ngaphandle kweziqinisekiso zanoma yiluphi uhlobo ezivezwa noma eziphakanyisiwe. Ukusebenza ngokugcwele ngangokunokwenzeka ngokulandela umthetho osebenzayo, i-plum amazing software, inc. Izama zonke iziqinisekiso, eziveziwe noma eziveziwe, kufaka phakathi, kepha kungagciniwe, eziqinisekisiwe zokuthengisa, ukulungela inhloso ethile, ukungaphuli noma okunye ukwephulwa kwamalungelo. Plum amazing, inc. Akuqinisekisi noma yenza izethulo maqondana nokusetshenziswa, ukuba semthethweni, ukunemba, noma ukwethembeka, noma imiphumela yokusebenzisa, noma okunye ukuhlonipha, izinto ezikulesi sayithi noma amanye amasayithi axhumene naleli sayithi.
Ngaphansi kwanoma yiziphi izimo, kufaka phakathi, kepha kungagcini, ukunganaki, i-Plum Amazing, inc. Yiba nesibopho sanoma yikuphi ukulimala okuqondile, okungaqondile, okukhethekile, okuvela noma okulandelayo, kufaka phakathi, kepha kungagcini lapho, ukulahleka kwedatha noma inzuzo, okuvela ekusetshenzisweni, noma ukungakwazi ukusebenzisa, izinto ezikulesi sayithi, noma ngabe iplamu iyamangalisa , inc. Noma i-plum omele ummeleli ogunyaziwe welulekwe ngamathuba omonakalo onjalo. Uma ukusebenzisa kwakho izinto ezivela kuleli sayithi kuholela esidingweni sokusiza, ukulungisa noma ukulungisa imishini noma idatha, ucabanga noma yiziphi izindleko zalokho. Ezinye izifundazwe azikuvumeli ukukhishwa noma ukulinganiselwa komonakalo odalekile noma onomphumela noma ukukhishwa kwesikweletu ezimweni ezithile, ngakho-ke umkhawulo ongenhla noma ukukhishwa inyumbazana kungenzeka kungasebenzi kuwe.
Noma ikuphi okokusebenza, imininingwane noma umbono owudlulisa noma owuthumela kuleli Sayithi nganoma iyiphi indlela uzothathwa njengokungewona owabanikazi, futhi ungasetshenziswa yiPlum Amazing, LLC. noma izinhlangano eziphethwe yizo nganoma iyiphi injongo, kufaka phakathi, kepha kungagcini ekukhiqizeni, ekukhiqizeni nasekukhiqizeni imikhiqizo. Awuvunyelwe ukuthumela noma ukuthumela noma ukuhambisa kuleli Sayithi noma yikuphi okungekho emthethweni, okusongelayo, okuhlambalazayo, okuhlambalazayo, okuhlambalazayo, okuhlambalazayo, okuvuthayo, okuqukethe izithombe zobulili ezingcolile, noma izinto ezingcolile, noma enye into engadala noma yisiphi isibopho somphakathi noma sobugebengu ngaphansi komthetho. .
Imigomo yokusetshenziswa kwezinguquko
IPlum Amazing, LLC. nganoma yisiphi isikhathi angabuyekeza le Migomo Yokusetshenziswa ngokubuyekeza lokhu kuthunyelwa. Ngokusebenzisa leli Sayithi, uyavuma ukuboshwa yinoma yikuphi ukubuyekezwa okunjalo ngakho-ke kufanele uvakashele leli khasi ngezikhathi ezithile ukuthola Imigomo Yokusetshenziswa ngaleso sikhathi oboshwe kuyo.
Hlobo luni lwemininingwane esiluqoqayo / esilucubungula
Inqobo nje uma uvakashela iwebhusayithi yethu ngaphandle kokunikezela ngemininingwane yomuntu, kuphela imininingwane ejwayelekile egcinwe kumafayela we-Apache log (ikakhulukazi ikheli lakho le-IP, usuku nesikhathi, igama kanye nohlobo lwesiphequluli sakho, ikhodi yesimo, inombolo yamabhayithi adlulisiwe, i-referrer namanye imininingwane ngamakhasi avakashelwe) iyarekhodwa. Lolu lwazi lulondolozwa kuphela njengendlela yokuqapha ukukhuphula ukuphepha kwenethiwekhi nolwazi ekuhlaselweni nasekungeneni futhi kususwa njalo. Ngaphezu kwalokho, ukuvakashelwa iwebhusayithi kuhlolwe ngokususelwa kulezi zingodo, kepha kuphela ngezinhloso zezibalo, inqubo lapho abasebenzisi ngabanye bengaziwa khona.
Ngaphandle kwalokho, siqopha imininingwane yomuntu kuphela uma sithunyelwe ngokuzithandela isivakashi, isb. Esitolo sethu esiku-inthanethi, nge-imeyili, noma lapho izivakashi zigcwalisa amanye amafomu. Imininingwane enjalo izosetshenziswa thina nabalingani bethu kuphela (isb., Umhlinzeki wethu wokukhokha i-MPay24) ngenhloso ekhonjisiwe.
Le webhusayithi isebenzisa iGoogle Analytics, insizakalo yokuhlaziya iwebhu enikezwe yiGoogle Inc. ("Google"). I-Google Analytics isebenzisa okuthiwa “amakhukhi”, amafayela wombhalo agcinwe kwikhompyutha yakho, avumela ukuhlaziywa kwendlela osebenzisa ngayo iwebhusayithi. Imininingwane eyenziwe ikhukhi mayelana nokusebenzisa kwakho le webhusayithi ivame ukudluliselwa kuseva yakwaGoogle e-USA futhi igcinwe lapho. Ngokwe-GDPR, isiza sethu sisebenzisa ukungaziwa kwe-IP, ngakho-ke ikheli lakho le-IP lisikiwe ngaphambi kokudluliselwa ku-Google. Ezimweni ezehlukile kuphela lapho ikheli eliphelele le-IP lidluliselwa kuseva yeGoogle e-USA futhi lancishiswa lapho.
Egameni lomhlinzeki wale webhusayithi, iGoogle izosebenzisa lolu lwazi ukuhlola ukusetshenziswa kwakho kwewebhusayithi, ukukhiqiza imibiko mayelana nemisebenzi yewebhusayithi nokunikeza ezinye izinsizakalo kumhlinzeki wewebhusayithi ngokuhlobene nokusetshenziswa kwewebhusayithi kanye ne-Intanethi. Amakhukhi
Ngaphandle kweGoogle Analytics, isitolo sethu esiku-inthanethi sisebenzisa amakhukhi ukukhomba inqola yakho yokuthenga ngesikhathi senqubo yakho yokuthenga. Asigcini imininingwane yakho efana negama lakho, ikheli, noma ikheli le-imeyili kula makhukhi. Lawa makhukhi abhujisiwe lapho ushiya isiphequluli sakho.
Sithumela incwadi yezindaba equkethe imininingwane emayelana nokuvuselelwa komkhiqizo, ukunikezwa okukhethekile, nezindaba zenkampani cishe kanye ngenyanga, kodwa kuphela kumakhasimende asigunyaza ngokusemthethweni ukuthi enze kanjalo. Uma ufuna ukubhalisela incwadi yethu yezindaba, sicela ukhethe ukungena ngesikhathi sokuthenga kwakho esitolo sethu se-inthanethi noma. Ungazikhipha ohlwini futhi nganoma yisiphi isikhathi. Yonke incwadi yezindaba iqukethe imininingwane yokuthi ungabhalisa kanjani futhi ungazikhipha ohlwini ngokuvele uxhumane nesevisi yethu yamakhasimende nge-imeyili.
Ukudluliswa kwedatha yomuntu siqu
Ngenxa yezizathu ezingenhla, singase sidlulisele idatha yakho yomuntu siqu kubahlinzeki besevisi ukuze benze imisebenzi futhi banikeze amasevisi kithi. Isayithi liwumzila we-PayPal kanye ne-Stripe ukuze ubethelwe imininingwane yokukhokha nabahlinzeki besevisi yokukhokha ukuze kucutshungulwe izinkokhelo, ukukhokhelwa emuva noma ukubuyiselwa kwemali, ngezinye izinjongo ezihlobene nokwamukela amakhadi esikweletu nawedebhithi, nokuvimbela, ukuhlonza, nokuphenya ukukhwabanisa.
Bonke laba bahlinzeki bezinsizakalo bazibophezele ngokuphelele kumazinga we-GDPR futhi ukucutshungulwa kulawulwa yinkontileka ehambisanayo ngokuya ngezidingo ze-GDPR kanye nanoma yiziphi ezinye izindlela eziyimfihlo zokuvikela nokuphepha.
Silondoloza imininingwane yakho kuze kube nini
Ukuze ufeze izinhloso ezingenhla futhi ukukunikeze isevisi yamakhasimende engcono kakhulu (ukuvuselelwa kokhiye belayisense, ukuthuthukisa izaphulelo, ukwesekwa kwezobuchwepheshe,…) sigcina imininingwane yakho uma nje siqhubeka nokugcina nokusabalalisa imikhiqizo yethu ngakho-ke ukulungela ukuxhasa amakhasimende ethu, ngaphandle kwalapho ucela ukususwa.
I-GDPR inikeza amalungelo alandelayo kubantu ngabanye:
Unelungelo lokucela isiqinisekiso sokuthi imininingwane yakho iyacutshungulwa noma cha, futhi, lapho kunjalo, ukufinyelela kwimininingwane yomuntu siqu.
Unelungelo lokucela ukulungiswa kwemininingwane yomuntu engalungile.
Unelungelo lokucela ukusulwa kwedatha yomuntu siqu ephathelene nawe ngaphandle kokubambezeleka okungafanele.
Unelungelo lokucela ukuvinjelwa kokucubungula idatha yakho yangasese.
Unelungelo lokuthola imininingwane ephathelene nawe, osinike yona, futhi unelungelo lokudlulisela leyo datha kwesinye isilawuli.
Unelungelo lokuphikisa nganoma yisiphi isikhathi ukucubungula idatha yomuntu siqu ephathelene nawe.
Uma kunanoma yimiphi imibuzo noma ukukhathazeka okuhlobene nokucutshungulwa kwedatha yakho yomuntu siqu, sicela ukhululeke ukuxhumana nomphathi wethu wobumfihlo.
Inhloso yokucubungula idatha
Sisebenzisa, sigcina, futhi sicubungula ulwazi…
Ukuletha imikhiqizo yethu kumakhasimende ethu.
Ukucubungula ama-oda kanye nemibuzo yamakhasimende ethu.
Ukwenza izibalo zokusebenzisa nokuqonda izidingo nezinkinga zamakhasimende ethu ukwenza ngcono imikhiqizo yethu newebhusayithi yethu.
Ukwazisa amakhasimende ethu ngokukhishwa okusha nokunikezwa okukhethekile.
Ukubona, ukuphenya, nokuvimbela ukuhlukunyezwa kwemikhiqizo yethu newebhusayithi yethu.
Isisekelo esisemthethweni sokucubungula imiphumela yakho yemininingwane yomuntu kusuka kwelinye noma amaningi amaqiniso angezansi:
Ubuciko. 6, isiL. I-1a: imvume yakho oyinikiwe yokucubungula idatha yakho yomuntu ngenhloso eyodwa noma ngaphezulu (isb., Ngokuthumela incwadi yethu yezindaba).
Ubuciko. 6, isiL. 1b: isidingo sokwenza isivumelwano phakathi kwakho nathi (isb., Ukuthenga).
Ubuciko. 6, isiL. 1c: isidingo sokufeza izibopho zethu zezomthetho / zezimali (isib. Umphumela wokuthenga).
Ubuciko. 6, isiL. 1f: izintshisekelo zethu ezisemthethweni zokufeza izinhloso ezibalulwe esigabeni esithi “Injongo” ngenhla.
Ngaphandle kwalokho, siqopha imininingwane yomuntu kuphela uma sithunyelwe ngokuzithandela isivakashi, isb. Esitolo sethu esiku-inthanethi, nge-imeyili, noma lapho izivakashi zigcwalisa amanye amafomu. Imininingwane enjalo izosetshenziswa thina kuphela ngezinhloso ezibonisiwe.
Sicela ubheke isigaba esingenhla.
ukudala izibalo zokusetshenziswa nokuqonda izidingo nezinkinga zamakhasimende ethu ukwenza ngcono imikhiqizo yethu newebhusayithi yethu.
ukubona, ukuphenya, nokuvikela ukuhlukunyezwa kwemikhiqizo yethu newebhusayithi yethu.